Daikon | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Quince: bara uru njirimara na contraindication maka ndị inyom na ndị ikom
Mkpụrụ osisi quince na-adọta ya, nke dị ka apụl, ma ọ bụ ube nke lemon ma ọ bụ agba odo odo, bụ otu n'ime ndị kasị baa ọgaranya na mkpụrụ osisi vitamin. Nnukwu ihe oriri ndị dị na mkpụrụ osisi ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na ihe oriri nke izu ụka na-achọ.
Otu esi eto eto di elu, kuru ma lelee daikon
N'isiokwu a, anyị chọrọ ịgwa gị banyere daikon - ihe ọkụkụ na-akpata, bụ nke a na-ewu ewu n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ ma jiri nwayọọ nwayọọ na-adọta mmasị ndị ọrụ ugbo ulo. Kedu ihe bụ daikon, kedu ihe nuances nke ịkụ na ịlekọta osisi a, na ihe a ga-ekwu maka oge nhazi na nchịkọta, ị ga-ama n'ime nkeji ole na ole.
Kwenye daikon maka oyi, ntụziaka
Radish bụ ngwaahịa zuru ezu n'afọ. Otú ọ dị, ọ nwere ihe ndị bara uru n'oge okpomọkụ. Ịchekwa uru nke mgbọrọgwụ nwere ike iwepụta maka oyi. Na otu esi echekwa ụdị dị iche iche daikon, tụlee ọzọ na isiokwu ahụ. Uru ndị ahụ bara Daikon - akwukwo nri akwukwo nri, ihe ana-eme nke radish. Ị nwere ike ide akwụkwọ banyere uru nke akwukwo nri a: Daikon nwere ndepụta nke vitamin B (site na B1 ruo B12).
Mkpụrụ tomato nkịtị "Cifomandra" na tebụl gị: kọwaa ụdị dịgasị iche iche, uru na atụmatụ nke ịkọ ihe
Kedu ka esi tụọ okpomọkụ nke ahụ oke bekee na ihe ndị ya
Ihe bara uru maka ahuike mmadu
Uzo esi emeso oria na pests aro (ugwu ash), nkpuru osisi
Anyị na-eto "Marshmallow na Chocolate" - a tomato nwere àgwà pụrụ iche: nkọwa nke ụdị na foto
Ndepụta nke ụdị nke ndị na-achị achị
"Ihe bụ isi bụ ịghara imerụ onwe gị ahụ!" Ngwọta maka bedbugs dị mma maka ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ
Ịkwalite ọkụkọ coop: otu esi eme akwụ maka itinye hens